Eeg Sheekooyinka Instagram ISAGAAN LAGA TAGNAYN (6 WAYS FASS)
Inicio/Hacking/Eeg sheekooyinka Instagram bilaa raad [6 xulashooyin]
0 20.123 4 daqiiqo akhri
Qodobkaan waxaan ku baran doonaa sida loo sameeyo arag sheekooyinka Instagram raad la'aan y dembi u baahan tahay leedahay koonto Instagram ah. Waxaan sidoo kale baran doonaa kala soo bax sheekooyinka Instagram iyada oo loo marayo isla codsiyada aan halkan kugu soo bandhigi doono. AAN BILAABNO !!!
Marka hore waa inaan kugu wargalinnaa in barxadda 'Instagram' aysan oggolaanayn Ver las sheekooyinka haddii aadan qorin. Marka waa inaan isticmaalnaa habka soo socda si aan u awoodno Ver histoysyada dhexdeeda iyada oo aan laga tagin wax raad ah.
Waxyaabaha kale ee ay tahay inaad ogaato ayaa ah in astaanta bartilmaameedku ay tahay inay lahaato sheekooyin dadweyne, iyada oo aan la helin asturnaan. Tani waxay fududeyn lahayd sida aan filayno. Macluumaadkan aan hadda ku siinay, aan aragno SHEEKOOYINKA INSTAGRAM OO AANAN KA TAGNAYN RAG ...
Casharbarka si loo basaaso sheekooyinka Instagram qarsoodi
Halkan waxaad ku haysataa 6 ikhtiyaar si aad si fudud ugu arki karto sheekooyinka Instagram, iyo tan ugu muhiimsan, adigoon raad ka tagin ...
1- Si aan u basaasaan Sheekooyinka waan heli doonnaa https://insta-stories.ru/
- Waxaan soo bandhigi doonnaa Isticmaalaha oo qor nooca.
- Waxaan gujin doonnaa sheekada waana intaas.
Hadaan rabno download la Sheekada Instagram Waxaan si fudud u gujineynaa badhanka DOWNLOAD ee geeska midig ee kore waana taas.
Waxa kale oo aad jeclaan kartaa: Sida loo arko DHAMMAAN qoraallada aad ka heshay INSTAGRAM
2- Kawaran haddii boggii hore uusan u shaqeyn si loo daawado sheekooyinka Instagram si qarsoodi ah?
Haddii sababo jira awgood boggii hore uusan kuu shaqeynayn, ha ka welwelin, had iyo jeer waxaa jira dhowr ikhtiyaarro, sida sheekooyinka tusaale ahaan. Kaliya waxaan gujin doonnaa xiriiriyahan https://storiesig.com/
Laga bilaabo halkan, waxaan kula shaqeyn doonnaa isla qaabkii aan horay kuugu sharaxnay.
- Waxaan soo bandhigeynaa isticmaaleha.
- Waxaan gujineynaa isticmaaleha waxayna ina tusi doontaa sheekada.
Haddii aan rabno inaan kala soo degno dhagsii DOWNLOAD waana intaas.
3- Dhammaan wanaag ilaa halkan sax? Fursadaha kale waa:
Waxaan u soconaa Barta internetka
Ma jiraan wax badan oo halkan laga dhaho, dhammaan codsiyadaan waxay u shaqeeyaan si isku mid ah. Kuwani waxay ku jiraan qaybta siyaabaha loo daawado sheekooyinka Instagram iyaga oo aan xisaab ku yeelan bartaan. Waxay sidoo kale ku siinaysaa ikhtiyaarka inaad kala soo baxdo sheekooyinka oo aad u aragto haddii qof uu kaa joojiyay inuu ku raaco. Halkaas ayaan kaaga tagaynaa adiga isku xirka si aad ugala soo degtid Bakhaarka.
4- Ma ogtahay mareegtada Storydonwnloader?
Kaalay, waanu kuu soo bandhigeynaa ... Iyagu waa tallaabooyin aad u fudud, halkan ayaan kaaga tagnay adiga Xiriiriyaha StoryDownloader markaa waad isticmaali kartaa markasta oo aad rabto.
Tallaabooyinka la raacayo si loogu daawado sheekooyinka qaab qarsoodi ah boggan:
Guji xiriiriyaha kore;
Waxaad gashaa magaca koontada aad rabto inaad ka hesho ama ka daawato sheekooyinkooda;
Guji Soo hel sheekooyin waana taas
Hadda waxaad arki kartaa sheekooyinka koontada si qarsoodi ah. Waxa ugu fiican ayaa ah inaad adiguna soo degsan kartoHaa, sidaad u akhrinaysid, waxaad ku haysan kartaa kombuyuutarkaaga haddii aad rabto, maaddaama "soo dejintu" ay ka muuqato sheeko kasta. kaliya waa inaad halkaa ku cadaadi si aad u hesho.
5- Ma ogtahay sidoo kale inaad XIRITAANKA koontada 'Instagram' (markaad aragto sheekooyinka) aysan ogaan doonin inaad aragtay qof sheekadiisa sidoo kale?
Aynu aadno tallaabooyinka; tani runti waa mid aad u fudud. In kasta oo aad halis ugu jirto in qofku si uun u ogaado inuu isagu xannibo oo haddii aad la kulanto, waad waayi kartaa taas ama qofka raacsan. Laakiin waan tagnaa!
Eeg sheekooyinka IG ee koontada aad rabto;
Intaa kadib, waxaad sii wadaa xannibista koontada aad ka eegtay sheekooyinka IG;
Waad sii deyn kartaa maalin ama wax kasta oo ka dhiman si aad u dhameystirto sheekada la soo bandhigay ka dibna waad fureysaa waana intaas.
Muhiim: Xusuusnow markii la xirayo koontada, qofkaasi ma awoodi doono inuu arko wax la xiriira waxqabadka koontadaada, quudinta ama sheekooyinka ama wax kasta, sidaa darteed, kama muuqan doonto meel kasta oo muujinaysa inaad aragtay sheekooyinkaas 'Instagram'.
Hab kale oo lagu arko sheekooyinka Instagram iyaga oo aan ogayn (Qaabka diyaaradda)
Mid ka mid ah siyaabaha ugu isticmaalka badan ujeedadan, marka laga reebo kuwa ugu fudud, waa isticmaal Habka AIRPLANE ee caanka ah. Waxaan ku tusinaynaa sida:
Markaad gasho koontadaada Instagram (halkan haddii aan u baahanahay inaan heysano xisaab Instagram), waxaan raadineynaa koontada aan dooneyno inaan ku aragno sheekooyinkooda.
Markaad aragtay inaad soo dejisay sheekada koontada ugu horreysa iyo sawirrada, daar qaabka diyaaradda. Marka tan la sameeyo, waxaad arki kartaa taariikhda qofka adigoon raad ka tagin.
Waa inaad tan u sameysaa mid kasta oo ka mid ah sheekooyinka haddii ay jiraan dhowr, taas oo ah, markii aad aragto midka ugu horreeya, waxaad xireysaa arjiga, mar labaad ayaadna daartaa xogta, mar kale gashid koontada oo ha u oggolaato inay soo dhigto sheekada labaad oo ay dib u kiciso si aad u aragto, waa wax fudud.
Waxaan rajeyneynaa in maqaalka uu kuu adeegay. Horaad u baratay arag sheekooyinka instagram qarsoodi. Sidan ayaan ku awoodnaa basaas sheekooyinka instagram inay na haystaan xiran ama inaynaan rabin inay ogaadaan inaan basaas nahay.
Markaad tan baratay waxay sidoo kale kugu ogeysiineysaa in waxyaabaha aad ku dhejiso sheekooyinkaaga la xadi karo oo lagu daabici karo meelo kale. In kasta oo ay ku qaadato 24 saac xisaabtaada Insta, si fudud ayaa loo soo degsan karaa.
Waxaa lagugula talinayaa inaad yeelato koonto gaar loo leeyahay si aad u badbaadiso naftaada khatarahaas yar yar ee u horseedi kara xatooyada aqoonsiga iyadoo si fudud loo soo uruuriyay sheekooyinkaaga sawirada lagu daabacay bogga
Xusuusnow: Ku soo dhejinta wax internetka waxay kaa dhigeysaa inaad lumiso xakamaynta, xitaa haddii waxani loo maleynayo inuu kaliya socon doono 24 saacadood.
Dhinaca kale, haddii aad ka heshay waxyaabahayaga oo aad rabto inaad wax ka barato wax la xiriira, waxaad ku soo diri kartaa codsigaaga barta Instagram ee koontada @citeianews.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiiseyneyso: Sidee hacksameyso xisaab Instagram ah
soo dejiso sheekooyinka instagram basaasaan sheekooyinka basaasaan sheekooyinka qof sheekooyin basaas insta basaas sheekooyinka instagram basaas storys insta arag sheekooyinka ig qarsoon eeg sheekooyinka insognito insta daawo sheekooyinka insta oo aan raad lahayn arag sheekooyinka instagram raad la'aan eeg sheekooyinka Ig si qarsoodi ah